– Posted by phyowaizaw
အောက်ပါအချက်အလက်များအား ကောင်းမွန်စွာ နားလည် အသုံးပြုနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
– Using bootstrap css and js.
– Basic CI framework
– Pure PHP Basic
အလုပ်လျောက်ထားလိုသူများသည် http://cv.foreverwebstudio.com/ တွင် ၀င်ရောက်လျောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Interview ၀င်ရောက်မည့်နေ့တွင် အပြည့်အစုံပါဝင်သော CV Form နှင့်အတူ CI Framework ဖြင့် ရေးဆွဲထားသော Project တစ်ခုအားယူဆောင်လာရမည်။
Job Categories: Featured and Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Salary: 100,000 - 300,000. 1146 total views,2today Apply for this Job / အလုပ်လျှောက်လွှာ